Maxay ka yiraahdeen dadka Masaarida maxkamadeentii Husni Mubaakar? – SBC
Maxay ka yiraahdeen dadka Masaarida maxkamadeentii Husni Mubaakar?
Cairo:- kadib markii ay ku dhawaaqday maxkamada dambiyada magaalada Al-qaahira in madaxweynihii hore dalka masar maxed xusni mubaarak iyo wasiirkiisii arrimaha gudaha xabiib al-caadil in ay noloshooda ku qaadan doonaan xabsi daa’im ah ayaa waxaa magaalooyinka waa weyn ee dalka masar ka bilowday dabaal degyo lagu soo dhoweenayo go’aanka maxkamada .
Haddaba waa maxay aragtida ay ka dhibteen siyaasiyiinta iyo axsaabta masar go’aanka maxkamadda?
Xamdeyn sabaaxi :-waxa uu kamid ahaa musharaxiintii looga adkaaday wareegi koowaad ee doorashada madaxtinimada dalka masar waxa uu ku qoray boga uu ku leeyahay twitter-ka “ ma khiaanayno dhiiga shuhadada, mana ogolaanayno in uu soo laabto nidaam ku dhisan gumaad , musuqmaasuq , kacdoonkeenana wuu soconayaa”.
Dr Yaasircaliwaa afhayeenka rasmiga ee ololaha musharaxa ikhwaanul muslimiin waxa uu sheegay in dacwadii loo soo jeediyey madaxweynihii hore ee dalka masar iyo wiilashiisa iyo qaar kamid ahaa caawiyaashiisa ay tahay mid laga gaabshay islamarkaana maxkamadu aysan qaban waajibkii ka saarnaa in ay uruurriso eedeenada ay kujirto dadkii ka dambeeyey dilka dibadbaxayaal.
Afhayeenka ayaa codsaday in maxkamadu ay dib ugu laabato go’aankii ay ku fasaxday ama ay ku sheegtay in dambi lagu waayey saraakiishii la shaqeenaysay wasiirkii arrimaha gudaha dalka masar xiliigii Mubaarak.
Maxed Al-baraadici oo isna kamid ah siyaasiinta dalka masar oo ka hadlay xukunka Mubaarak ayaa sheegay in ay kamuuqto maxakamadu in weli ay jiraan qaar kamid ah maamulkii hore oo gacan kula jira maamulka haatan haya talada dalka islamarkaana doonaya in ay fashaliyaan kacdoonkii kadhacay dalka masar.
Axmed shafiiq oo isna ah mid kamid ah labada musharax ee u soo gudbubtay wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada dalka masar ayaa sheegay in uu ixtiraamayo xukunka garsoorka islamarkaana musharax ahaan uu cadeenayo in uu aqbalayo xukun kasto oo garsoor.
Shafiiq ayaa intaas ku daray in xukunkan uu darsi u noqon doono madaxweynaha soo socdo.
Sidoo kale xarakada ikhwaanul Muslimiin oo bayaan ka soo saartay xukunkaas ayaa is-weydiisay “ haddaba yaa dilay shuhada , haddii la yiri madaxdii booliska dambi ayaa lagu waayey?”.